Sahara Andrefana: Tapitra ny fahavaratra ho an’ny ankizy Sahrawi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2018 2:54 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Español, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Fotoana hanararaotan'ny olona maro hijerena toerana vaovao, samihafa ny fahavaratra. Mandeha any ivelan'ny sisintanin'ny firenena izy ireo, ary manavatsava fiteny, talaky maso sy rafitrano hafa. Mety hiova ny fiainana mandritra ny fialan-tsasatra fahavaratra, satria tsy azo antoka izao tontolo izao ary maro ireo fanamby ivelan'ny tanindrazana sy ny asa mahazatra. Indraindray mitsidika ny “lafiny hafa” ny olona malaza- toerana izay miatrika fepetra henjana, ary lehibe ny fiantraikan'izany amin'izy ireo rehefa manolo-tena amin'ny zavatra iray izy ireo, tahaka ny nataon'i Javier Bardem taorian'ny fitsidihana ny tobin'ny mpitsoa-ponenana ao Sahara Andrefana. Manohana ny Todos con el Sahara.ankehitriny ity mpilalao sarimihetsika efa nahazo Oscar ity.
Matetika manintona amin'ny zavatra iray ny anarana malaza. Nitsidika ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana tany aloha ireo mpanakanto toa an-dry Manu Chao, sy ilay mpanoratra Eduardo Galeano ary nanolo-tena tamin'ny zavatra arovana iray, araka ny nolazain'ny Caminando en el desierto :
Any Espaina, maro ireo fianakaviana mampiantrano ankizy Sahrawi mba handany ny fahavaratra any an-tranon'izy ireo, ary mizara kolontsaina hafa ao anatin'ny tontolo azo antoka, (azonao atao, ohatra ny mijery ny ankizy Sahrawi any Cordoba) saingy efa tapitra ny fahavaratra Septambra, ary izao no fotoana hanaovana veloma ny fianakaviana nampiantrano azy ireo, araka ny nolazain'i Amigos del Sahara:
Finiavana roa mahafinaritra no misarika ny sain'ny olona maro ao amin'ny aterineto. Pensilihazo ho an'ny fandriampahalemana (Lápices para la Paz) manohana ireo ankizy miatrika ady mitam-piadiana amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo pensilihazo sy fitaovam-pianarana ary mahita tantara mahafinaritra tanaty boaty nohavaozina izy ireo:
Finiavana hafa kosa ny Refugees Exhibition, izay ampiantranoin'ny Mpisolovava mpilatsaka an-tsitrapo ao Espaina mandritra ny fahavaratra mba hanangonam-bola sy hanampiana ny Sahrawis.